23rd September 2020, 05:12 pm | ७ असोज २०७७
काठमाडौं : वीर अस्पतालमा उपचारका लागि लगेका ६३ वर्षीय कैदीको मृत्युबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय कारागारले सिसीटिभी फूटेज सार्वजनिक गरेको छ।
केन्द्रीय कारागार र वीर अस्पतालले गृह मन्त्रालयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै रामलखन जयसवालको मृत्यु शंकास्पद नभएको स्पष्ट पारेको छ।
जयवालको मृत्यु शंकास्पद रूपमा भएको उनको परिवारले दाबी गरेका थिए।
कारागारमै रहँदा गम्भीर बिरामी परेपछि उनलाई भद्र गृहभित्रैको अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको डा श्रीराम तिवारीले बताए।
'उहाँ बिरामी पर्नुभएपछि भद्र गृहभित्र रहेको अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुनुभयो। ७ मिनेटजति हेर्‍यौं। हामीले ब्लडप्रेसर अन्य अवस्था चेक गर्‍यौ। उपचार सम्भव देखिएन। त्यसैले वीरमा रेफर गर्‍यौ,' कारागारका डाक्टर तिवारीले भने।
९: ४५ बजे कारागारबाट अस्पताल लैजाँदा उनी हात हल्लाउँदै गएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। कारागारबाट ह्विलचेयरमा राखेर निस्केका उनको बाटोमा रोगले च्यापेर मृत्यु भएको हुन सक्ने तिवारीले बताए।
'उहाँ दीर्घा रोगी हुनुहुन्थ्यो। यस्तो बिरामीको मृत्यु जुनसुकै बेला हुनसक्छ,' डा तिवारीले भने।
अस्पताल आइपुग्दा १०:५५ मा मृत्यु भइसकेको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले बताए। उनले भने, 'वीरमा आइपुग्दा पनि शरीरमा कुनै चोट थिएन। शंकास्पद थिएन।'
वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सेञ्चुरीले मृत्युमा शंका गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए। सेञ्चुरीले मृत्युपछि आवश्यक तापक्रम भएको कोठामा नराख्दा शरीर सडेको बताएका छन्।
जयसवाल धेरै अघिबाटै बिरामी रहेको र उनको उपचारमा पाँच लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले बताए। 'विभिन्न आठ अस्पतालमा उपचार गरिसकेका थिए। उनको उपचारमा पाँच लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,' बाँस्कोटाले भने।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका घर भएका उनी ज्यान मार्ने मुद्दामा ८ वर्षदेखि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा कैद भुक्तान गर्दै थिए। असोज ३ गते राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि जयसवाललाई अस्पताल लगिएको थियो। अस्पताल पुर्‍याउने बित्तिकै मृत्युको भएको घोषणा गरिएको थियो।